Masaki C. Matsumoto: Miteny Anglisy , LGBT, Hafa Fitiavana Ary Feminista Ao Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2017 0:39 GMT
Ny bilaogy Gimme a Queer Eye an'i Masaki dia efa ela no niasa fa efa hatramin'ny taona 2004 izany, ary nahitana lohahevitra isan-karazany amin'ny teny Anglisy, anisan'izany ny fiovan-tsatan'ireo LGBT ao Japana -sy ny rohy mankany amin'ny tetikasa mitovy fijery toy ny Rad-queers Speaking English For You na Rad-hafa fitiavana Miteny anglisy Ho Hianao, izay nanaovan'i Masaki teny fampidirana hoe:
Nanampy tamin'ny fanadiovana ny fifanjevoana i Masaki tamin'ny alalan'ny vilaogy nalefa tao amin'ny YouTube, antsoina hoe Masaki's QueerESL. “Raha nahatsapa ho somary diso fanantenana tamin'ny lahatsoratra ho fitaovana/endrika fampitam-baovao amin'ny vahoaka,” hoy i Masaki tao amin'ny teny fanolorana ny fantsona “Nanomboka nanao lahatsary miompana amin'ny LGBT, sy ireo voahilikilika noho ny fironam-pitiavana tsy mahazatra, sy ny feminista aho !”
Nandefa lahatsoratra tao amin'ny tranonkala mifandraika amin'ny antsafa vao haingana nataon'i Matsumoto niaraka tamin'ny Anime Feminist, tranonkala manadihady ny Sarimiaina Japoney sy manga amin'ny alàlan'ny maso feminista i Sokka shot first, mpikambana iray ao amin'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera MetaFilter any Etazonia. Efa nomarihina tao amin'ny MetaFilter fa “ho raisina an-tanandroa amin'ny fanolorana tsikera japoney ankoatra ny fomba fijery tandrefana ananan-dry zareo manokana” ny Anime Feminist; tsy nandiso fanantenana i Masaki , tamin'ny fanomezana ny antsafa tamin'ny dikanteny Anglisy sy Japoney.
Tao amin'ny antsafa, ankoatra ny firesahana momba ny tantarany teo aloha (nipetraka tany Etazonia sy tany Nouvelle-Zélande izy, ary ankehitriny nanokatra toeram-pisotroana (bar) any amin'ny faritra ambanivohitra ivelan'i Tokyo), dia nanao fanamarihana vitsivitsy momba ny karazana vondrom-piarahamonina LGBTQ+ sy ny fifandraisana misy ao Japana i Masaki, nizara ny fihetseham-pony ihany koa izy raha toa ka manana endrika tsara ao amin'ny kolontsaina pop Japoney ny olona LGBTQ+ (nanolotra lahatsoratra amin'ny teny Japoney sy Anglisy i Masaki tamin'ny antsafa Anime Feminist):
Nilaza i Masaki rehefa nanontaniana momba ny fahatsapany ny sarimiaina yaoi/BL sy manga, izay maneho ny fiarahan'ny lehilahy tia lahy mikendry vehivavy mirona kokoa amin'ny fitiavan-dahy hoe:
[Ao Japana] ‘mahafinaritra’ ny mihetsika tahaka ny tery saina. ‘Mankaleo’ ny ankasitrahana. Tsy olana ny fahateren-tsaina na mpiara-dia mety ho ao ambany ao. Manaova tahaka ny tery saina fotsiny, lazao hoe: ‘ Kimoi [maharikoriko] ny pelaka ‘, mifanoroha ny lehilahy samy lehilahy hanaovana ny lalao batsu. ‘ Mahafinaritra’ izany ary tsy misy ny mitaraina, satria ‘mankaleo’ ianao raha mitaraina . Na ny orinasa fampitam-baovao aza tsy misy mandray izany ho matotra rehefa maharay fitarainana fisian'ny fankahalana pelaka sy/na trans (nanova taovam-pananahana) amin'ny fandaharan'izy ireo.
Midadasika ny antsafa rehetra, ary nanazava tamin'ny fomba maro ny fomba fijerin'i Masaki manokana momba ny LGBTQ + kolontsaina any Japana.